Winks Canonical amin'ny takelaka. | Avy amin'ny Linux
Toa ireo bandy ao amin'ny Canonical dia maniry ny handrakotra tsena bebe kokoa noho izay andrasan'izy ireo amin'ny ankapobeny.
Hitanay izao fa te-hanipy avo izy ary hikapa ireo takelaka misy ny vaovao fa misy mpiorina mivoaka "Tsindrio iray" hametraka Ubuntu amin'ny Rohy 7 an'ny Google. Na dia toa tsy hevitra ratsy na fihetsika ratsy aza izany dia manontany tena aho hoe tena te-handinika be i Canonical.
Raha teôria dia ampiasaina amin'ny fomba tsotra ny installer ary ny hany ilainao dia ny manokatra ny bootloader hanao an'io dingana io. Alohan'ny hanontanianao ahy dia mbola tsy nanadihady ny fomba hanaovana izany aho ary tsy afaka milaza aminao ny antony satria raha ny marina dia tsy liana amin'ny fametrahana Ubuntu amin'ny takelaka iray aho; Canonical dia milaza fa dingana fitsapana fotsiny io ary mbola tsy manana zavatra be dia be ny rafitra, noho izany dia kendrena amin'ireo olona te-hizaha toetra sy hifanadala amina zazavavy geek mandritra ny fotoana fohy izany ary hilaza aminy "Jereo, manana Linux amin'ny takelaka misy ahy aho", fa amin'ny fampiasana isan'andro, na miasa aza, tsy isalasalana fa hahomby izany.
Mikasika ny fanambarana ny te-hikapa bebe kokoa noho izay voatetika, ho ahy Canonical dia manaparitaka ny ezaka be loatra fa tsy mifantoka amin'ny teboka manan-danja sy manatanteraka tetikasa feno kokoa, hoy aho, Ubuntu satria rafitra manana olana ny rafitra iray, manana ny tetik'asa izy ireo miaraka amin'ny Android ary manana Unity izy ireo, izay mila hery bebe kokoa ihany koa hanaovana pirinty eo amboniny.
Raha fintinina dia tsy lava loatra na lalina ny vaovao, ary tsy mikasa ny hiresaka momba izay ataon'ny Canonical na tsy ataony aho.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Winks Canonical amin'ny takelaka.
Eny, ny ubuntu dia toa mahafatifaty amin'ny takelaka iray, na dia tsy hiandry ny kinova farany aza isika mba hanome criterio feno
Ireo avy amin'ny Canonical ... jereo fa mampiasa Ubuntu aho fa ...
Mihevitra aho fa tokony hiezaka mafy ny Canonical hanambatra ny rafitra fiasan'izy ireo ary hampiorina azy io ao amin'ny sampana misy azy.
Tsy mitombina ny fanaovana ampihimamba faritra maro raha tsy manome 100% amin'ireo ianao .. takelaka, tv ubuntu, finday..pufff.
Avelao hivoaka ny Ubuntu Tablet Remix.
Hahahahahaha .. Nisafoaka aho hahahaha Ka tsy Tabluntu? Ha ha ha ha ha ha
Fanontaniana, raha malalaka sy maimaim-poana i Ubuntu, aiza ny tombom-barotra Canonical amin'izany rehetra izany? Eny, heveriko fa tsy mandray asa be loatra ho an'ny fitiavana Linux izy ireo tahaka ny mitranga any amin'ny distro hafa. Ny marina dia tsy fantatro hoe aiza no tian'izy ireo aleha, na inona no hieritreritra azy ireo.
Fanontaniana mahaliana. Tsy ny maodelim-pandraharahana rehetra dia mifototra amin'ny fivarotana ny vokar'izy ireo toy izany, jereo ny Google, tsy amidy anao izy ireo, tsy andoavany anao hampiasanao ny motera fikarohana, ny motera fikarohana (sy ny serivisy maimaimpoana rehetra mifandraika amin'izany) dia misy mampiavaka azy: natao hanohanana ny sehatra fanaovana dokambarotra google.
Canonical dia tsy mahazo ary tsy hahazo na inona na inona amin'ny fivarotana Ubuntu, satria hividianana rafitra miasa dia mijanona amin'ny Mac na Windows aho, mahazo vola miaraka amin'ny ivon-rindrambaiko izy ireo, mivarotra fanohanana, miara-miasa amin'ireo mpanamboatra ... raha ny takelaka afaka mahazo vola fotsiny amin'ny sehatra hafa mamela azy ireo handrakotra toerana bebe kokoa. Zavatra sarotra be ny manazava azy.
Ry nano malalako ianao nahavoa ilay toerana. Ny maodelin'ny orinasa ampiasaina amin'ny tontolon'ny * NIX dia tsy mitovy amin'ny an'ny hafa ary manana tombony lehibe kokoa izany.
Ny ankamaroan'ny orinasa manohana fizarana Linux dia mahazo ny vola azony amin'ny fanohanana, vitsy ny mivarotra rindrambaiko rehetra koa.
Amin'ny raharahan'i Ubuntu, ankoatry ny fidiram-bola avy amin'ny fanohanana, dia mandika kely ny maodelin'i Apple (indrindra amin'ny fivarotana mozika) sy amin'ireo komisiona izay handoavany vola amin'ny Amazon amin'ny alàlan'ny OS-ny.
Ary ivelan'ny Linux izay fahita matetika:
Modely 1: amidiko aminao ny rindrambaiko tena lafo vidy, fa omeko anao ny fanampiana amin'ny vidiny ambany indrindra na maimaim-poana. (toy ilay manaraka an'i Microsoft, ohatra)
Model 2: Mivarotra fifanarahana fanohanana anao mandritra ny taona X aho, saingy maimaimpoana tanteraka ilay rindrambaiko na miaraka amin'ny vidiny mirary. (Io no fahita indrindra - izay tsy midika hoe ilay hany rindrambaiko rindrambaiko malalaka sy matihanina tsy miankina)
Izaho manokana dia aleoko ampiasaina ao amin'ny Kubuntu Tablets, ny KDE plasma Active 3 dia miasa tsara kokoa noho ny nandrasako, ny marina dia nahavita nametraka Kubuntu ho an'ny Takelaka tamina takelaka Woo an'ireo izay amidy ao Carrefour aho, eto Kolombia, tsy haiko raha Hivarotra azy ireo any amin'ny firenena maro kokoa izy ireo, saingy avelao aho hiteny aminao fa tsy misy dikany izany, tsy manadino an'i KDE aho ary fandrosoana lehibe sy tena tsara izany, izany no ilazako hoe aleoko ny KDE amin'ny takelaka, ary tampoka aza Gnome Shell fa tsy firaisankina.
Ivana Barra Martinez placeholder image dia hoy izy:
Izaho manokana dia hametraka Tabluntu ao amin'ny vakizoro galaksiako. Nampiasa CyanogenMod 10 nandritra ny fotoana kelikely aho, indrisy anefa fa tsy mahafaly tanteraka ny zavatra ilaiko amin'ny finday ny android. Tabluntu dia mety ho safidy tsara ho ahy, amin'ny fomba fijery rehetra, manana customization an-tapitrisany misy izy, manome antsika hisafidy izay tadiavintsika. Miala tsiny aho mahita fa isaky ny Android mivoaka dia manohy mampiasa motera java taloha ihany izy ireo, izay ny hany manakana ny fivoarana sy ny fanitarana ny rafitra mihitsy, na dia henjana aza izany.
Manantena aho fa hanao izany ary hanao tsara i Canonical, fa, na eo aza ny zava-drehetra, dia mino azy ireo aho, satria izy ireo no nampanakaiky ahy tamin'ny Linux (iza no manome sakafo ahy anio).
Valiny tamin'i Ivan Barra Martinez
Ity kinova an-dry zareo ity dia natao ho an'ny fampandrosoana sy fitiliana, noho izany dia tsy hatolotra.
Ankehitriny, momba an'i Java, +100000000000000000000000, manohana anao aho satria tsy fantatrao izany, saingy izany no amidiny sy izay ampivelaran'ny olona (tsy haiko hoe maninona no misy fiteny tsara kokoa any).
Mba tsy ho ela loatra. Te hanana Linux amin'ny takelakao ve ianao? Mampiasa Plasma Active izy io, miorina amin'ny KDE sy Linux, izay efa milamina ary mandroso tsara.
Wow, tsara izany, mbola te-hamaky tutorial efa vita tsara any aho, matahotra ny hahazo biriky aho raha manao zavatra tsy mety.
Hanandrana aho, raha mety izany, hoy ny hevitro.
Liana aho, inona avy ireo fiteny lazainao ireo izay tsara kokoa noho ny Java? satria ny tena marina dia tsy tiako sy kivy aho fa tsy programmer ary tsy mahalala zavatra momba an'io karazan-javatra io.
Raha miresaka momba ny tontolo iainana amin'ny takelaka aho dia namaky ihany koa fa ny Enlightenment dia manana safidy ho an'ireo takelaka izay hitako ihany rehefa nisedra azy aho volana vitsivitsy lasa izay ary na dia tsy nanandrana azy aza aho dia hitako fa tena ilaina io raha tsaroako ny namakiako ny maodely Nokia Ampidiriko ao amin'ny iray amin'ireo terminal misy azy io, iza no nanandramana azy? Mahaliana tokoa ny fahalalana ny hevitry ny olona iray momba an'io, na dia eo aza ireo horonantsary hitako fa tena mandaitra.
Alohan'ny hanodikodinanao ahy dia ao amin'ny birao iray aho ary PC nindrana, izany no antony tsy atsipazako hevitra avy amin'ny Linux.
Fiteny tsara kokoa noho Java? Betsaka. Voalohany indrindra dia fantaro fa ny Java dia tsy fiteny natambatra satria mino ny maro, TSIA, tsia mihitsy. Java dia fiteny voadika mazava tsara izay manangona ny mpandika teny amin'ny fampiasana milina virtoaly mavesatra, izay mahatonga ny fampiharana Java lehibe ho sakafo fihinana loharanon-karena, tsy lazaina intsony fa maharikoriko tsotra izao ny fandikana azy.
Ankehitriny, raha ny tadiavinao dia ny hafainganana amin'ny fanatanterahana dia miahiahy aho fa hahazo zavatra tsara kokoa noho ny C na C ++ ianao, raha tsy hoe ianao dia iray amin'ireo lehilahy voloina izay sahy manao programa amin'ny assembler. Raha te-hikendry bebe kokoa amin'ny fandefasana tranonkala ianao, dia manana Python sy Ruby miaraka amin'ireo rafitra misy azy ireo Django sy Ruby on Rails (sy ireo drafitra mikraoba mahaliana maro kokoa), na, amin'ny tranga ratsy indrindra, PHP. Ho an'ny birao dia azonao atao ihany koa ny mampiasa Python tsy misy olana satria manana bindigns saika amin'ny zava-drehetra izy ary raha mbola tsy mila fampisehoana miavaka ianao dia azonao ampiasaina, raha ny marina, hiteny aho fa azo ampitahaina amin'i Java izy io satria misy tetik'asa manangona Python amin'ny ByteCode amin'ny fomba tena mahomby. ary navadik'izy ireo bala i Python (Cpython heveriko fa iray amin'izy ireo).
Tontolo goavambe izy ity, mamporisika anao aho handinika sy hianatra.
Absalom dia hoy izy:
Miombon-kevitra aminao aho, afa-tsy amin'ny hevitrao raha amin'ny tranga ratsy indrindra PHP, raha mahita PHP ianao dia misy teknika mahatonga ny mpandahatra fandaharana ho tsy mahay, azoko lazaina aminao fa ny iray amin'ireo fiteny mpizara ampiasaina indrindra dia manome elk, ny tena marina dia PHP fiteny tena tsara izy io na dia mampidi-doza aza ny fomba fiasa sy ny teknika maro
Valio amin'i Absaloma
Ny fidirana Ubuntu ho takelaka dia nambara hatramin'ny nanombohan'ny Unity, na ahoana na ahoana, tsara foana ny manana safidy iray hafa ...
Tsy tiako ny milaza an'io fa: "Nolazaiko anao izany." Nandritra ny fotoana fohy izao, ny maodelin'ny orinasa Cannonical dia nanondro iray tena mitovy amin'ilay ampiasain'ny orinasa paoma (eniendase apple). Araka ny efa voalaza, ny fivoahan'ny unty, ny zava-misy fa maro amin'ireo mpiasan'ny google no mampiasa kinova manokana an'ny ubuntu, ny fitoviana amin'ny firaisana ao amin'ny google plus, ny fifandraisana misy ifandraisany amin'ny adroid, ny phonobuntu, TVuntu, tablebuntus, sns, sns, sns. Vitan'izy ireo ny famolahana ny faribolana. Microsoft dia efa mahatsapa dingana ao amin'ny asotea ary miasa hanao zavatra mitovy amin'ny findainy sy ny finday finday izay hikatona tanteraka (toa an'i Apple). Tsia, tsia ?.
Ny tontolo iainana, ary indrindra ny fitaovana finday, dia toerana fivarotana izay manomboka mioritra ary mamaritra amin'ny fomba "voafaritra" sy ny fomba amam-panao. Apple dia manana fifehezana tena tsara momba an'io, Microsoft dia tsy te-hofoanana na voafetra amin'ny tontolo tena manokana (mahatakatra ny an'ny PC) ary ny ubuntu, izay mifanome tanana amin'i Google, dia miasa mba tsy hiala amin'ny asa aman-draharaha.
Ny KDE miaraka amin'ny kinova takelaka ary ny Gnome miaraka amin'ny Shell dia ohatra iray fa ny fitaovana finday no ho lohalaharana amin'ny orinasan-tserasera IT ary ny PC dia ahemotra amin'ny fe-potoana faharoa (fa izy ireo kosa dia ampahany manan-danja amin'ny tontolo iainana).
Ankehitriny, Mozilla sy HP dia miasa amin'ny WebOS-ny ary raha ny tena izy dia azo apetraka amin'ny Ubuntu i Mozilla (mbola ao anaty kinova fanombanana izany), ka manana isika:
Amin'izao fotoana izao sy amin'ny fotoana antonony, ny ezaky ny mpilalao lehibe eo amin'ny sehatry ny indostria dia mifantoka amin'ny telefaona finday, ka na ho ela na ho haingana dia tsy maintsy hifantoka amin'ny "mitovy" ny interface amin'ireo fitaovana ireo ka ny làlana fianarana ho an'ny kely ny mpampiasa antonony ary amin'ny fidirana an-tsena faran'izay betsaka azo atao.
Tsy noho izany antony izany dia misy fitoviana maro (ny maso dia tsy mitovy amin'ny iray ihany) eo anelanelan'ny ohatra tablette Tablet, Gnome SHELL ary Android ary raha manombatombana bebe kokoa isika, ireo interface ireo dia hitovy, tsy eo anelanelany ihany fa koa amin'ny PC ary raha mila ohatra izy ireo dia ohatra ny Android ho an'ny PC ary ny "fitoviana" amin'ny Gnome Shell sy Tablet Tablet ary ny marina dia heveriko fa tsy kisendrasendra izany (araka ny nolazaiko teo aloha, tsy mino ny kisendrasendra sy bebe kokoa aho. amin'ity orinasa ity).
Fantatro fa izay nanehoako hevitra dia hanamarika ahy ho heretika sy maloto ary, toa an'i Giordano Bruno, dia angatahina aho hanameloka ahy amin'ny tsatokazo. Fantatro fa tsy dia maro no hanaiky ny fanambarako, fa raha ny marina, alohan'ny hanipazako tena ao anaty afo, manadihady kely dia ho hitanao fa na dia toa adala sy manjavozavo aza izany lazaiko izany dia tsy dia marina loatra.
Tsy lainga izay lazainao, ny hany zavatra tsy ekeko dia ny famongorana ny pc. Ny tena izy dia, ny PC dia nanolotra zavatra izay tsy hatolotry ny telefaona na ny takelaka velively: azo zahana sy repowering.
Azoko atao ny mampitombo ny RAM an'ny pc, fa tsy an'ny fitaovana hafa. Tsy manana fahanterana efa voalamina ny PC, angamba ny singa ao aminy, fa azo ovaina sy azo ovaina (overclock, sns.), Ny PC dia tsy hitsahatra tsy ho mpanjakavavy, na dia «mobility» aza dia lohalaharana, hisy foana ny fotoana rehefa mipetraha milamina ary eo no tsara kokoa ny arivo heny amin'ny PC.
Raha ny filazan'i nano anao dia efa ela no voalaza mialoha ny "fahafatesan'ny" PC; Nitranga izany rehefa nipoaka ny solosaina finday taona vitsy lasa izay ary mitranga indray izany ankehitriny amin'ny fiakaran'ny fitaovana finday. Raha ny hevitro dia tsy hitranga izany satria ny antony manandanja indrindra manakana azy dia ny fandanjalanjan'ny PC, izay tsy misy amin'ireo fitaovana sisa tavela ankehitriny, ary tsy mieritreritra an'izany amin'ny endrika manaraka. Ny zava-misy fotsiny hoe afaka mampiditra diska maro hafa, karatra sary ary / na tuner, fahatsiarovana sns, dia hitazona azy ireo ho velona ao anatin'ny tontolo iainana ankehitriny.
Raha mandinika isika, dia tsy toy izany ny "fandroahana" fitaovana sasany, fa "fivoarana" amin'ny alàlan'ny "fiampitana" amin'ireo karazana hafa; ohatra: nanjavona PDA nanome lalana ireo finday avo lenta (fiampitana eo anelanelan'ny PDA sy telefaona finday).
Amin'ny toe-javatra misy ankehitriny, sy ireo azo vinavinaina ao anatin'ny fotoana fohy sy antonony, dia hitohy ny fiaraha-miaina ny "karazana" rehetra eo amin'ity tontolo iainana ity, na dia miova aza ny firafitr'izy ireo, satria ny fitaovana tsirairay dia mamaly ireo filana manokana izay tsy afa-po tanteraka amin'ny ankapobeny. ho an'ny iray hafa; jereo ny fomba iaraha-miaina ny takelaka sy ny mpamaky ebook, na dia azontsika atao aza ny mampiasa ilay taloha ho an'ny asan'ity farany.
Ny fanaovana Nostradamus amin'izao fotoana izao dia tsy dia mora loatra, ary kely kokoa aza raha ny momba ny fanomezana fanamarinana ho faty.
Ary azafady amin'ny bileta ...
Tsy misy olana Charlie-Brown, raha ny marina dia tsy mihevitra ny tenako ho guru aho, mpilaza ny hoavy na mpamosavy izay mijery ny ho avy toa an'i Harry Potter sy ilay mpitsangatsangana.
Amin'ny maha mpanolo-tsaina ny IT ahy dia mila manadihady sy mamakafaka ny tranga mety hitranga mety hitranga aho satria misy fiantraikany amin'ny fomba iray (ankolaka na indraindray mivantana) ny tsiro sy ny takian'ny serivisy maro izay tokony hodinihin'ny sasany amin'ireo mpanjifako. . Ohatra, ny tambajotra sosialy, ny fidirana finday, ny informatika, ny angon-drakitra ary ny fifandraisan'ny fampiharana sns. Ireo endri-javatra ireo dia tsy maintsy tafiditra ao anatin'ny karazana vahaolana amin'ny raharaham-barotra izay mitady hanararaotra ny "lamaody" na "fironana" ho zava-baovao ary fiheverana ny fampiasana ireo haitao farany. Ity, na dia toa mampihomehy aza, dia mivarotra ary amin'ny faran'ny andro mpandraharaha iray no mahaliana azy.
Salama jorgemanjarrezlerma, nandritra ny 9 taona (hatramin'ny vao tena marina tokoa), ny asako dia nitovy be tamin'ny zavatra nofaritanao, ka heveriko fa azoko tsara izay lazainao; Ny zavatra mitranga dia, araka ny hevitro, ny filaharan'ny hetsika dia toy izao manaraka izao: ny fandrosoana amin'ny teknolojia IT, miaraka amin'ny tranonkala 2.0, ny rahona mitaraina, sns., Dia manome ny fisehoan'ny fitaovana vaovao (indrindra ny fitaovana finday), izay lasa ampahany amin'ny tontolo iainana, mifaninana amin'ireo efa misy eo amin'ny sehatry ny tsena, NEFA, ambonin'izany rehetra izany, manampy azy ireo. Io dia lasa "fironana" sy "lamaody" (fanehoana ara-tsosialy nefa koa vokatry ny fanodinkodinana tsena) izay nametrahana vahaolana ara-barotra tamin'ny farany, izay amin'ny fangatahana antonony sy / na miteraka fivoarana vaovao amin'ny teknolojia IT, sns. ...
Ny tanjoko tamin'ilay fanehoan-kevitra dia ny hanasongadinana ny fifamenoan'ireo fitaovana (na misy na vaovao) izay tsy midika velively amin'ny fomba fanjavonan'ny PC, raha azonao izany fa fanafihana mivantana ny hevitrao, tsy izany ny tanjoko, na izany na tsy izany, dia ho tsena handà antsika ary, indrisy, tsy manan-jo hamaly.
Na dia marina aza ny lazainao momba ny PC (heveriko fa tsy miova ihany) dia hanana andraikitra hiantsoana azy hoe "ambaratonga faharoa" izy amin'ny heviny fa io no ivon'ny ecosystem ary hamela anao ny telefaona finday " ento "miaraka aminao. Raha ny marina, misy mpandinika sasany mihevitra fa ny fitaovana finday sasany toy ny "tablette" dia ho fitaovana marobe na amin'ny teny tsotra, ampahany amin'ny PC ary apetrako ny ohatra ny Acer Iconia izay solosaina finday misy monitor tsy azo ivalozana ary miasa toy ny takelaka.
Azo antoka fa tsy hitovy velively amin'ny PC birao azo apetraka sy esorina, fa raha mijery akaiky ianao dia maro amin'ireo singa no "azo zahana" ary miaraka amin'ny fiainana ilaina fohy kokoa noho ny tamin'ny 10 taona lasa.
Ary izany no nahatonga anay tsy nahita ny Ubuntu ho an'ny birao ... Ary nanomboka ny diany namakivaky ny tontolon'ny efijery fikitika (^ _ ^) izy
Raha vantany vao azo ny takelaka Vivaldi miaraka amin'ny Plasma Active 4, ho hitako raha afaka mividy iray aho.
Safidy iray hafa ny fahazoana takelaka manadalana mba hamafana ny banga entiny ary hametrahana GNU / Linux ho an'ny ARM, kokoa ny Arch ary raha tsy izay toa tsara kokoa tamin'izany fotoana izany - tsy azo antoka ny Ubuntu, mavesatra loatra izy io ary mikorontana amin'ny takelaka iray.
Gaspar marquez dia hoy izy:
Heveriko fa mety ho an'i Canonical ny mametraka ny sotro any amin'ny faritra maro samihafa ka manomboka manontany tena ny olona tsy mahalala rindrambaiko maimaimpoana hoe inona izany. Ubuntu dia tsara ho an'ny vaoavao amin'ny Linux (toa ahy), izy io manokana no nanokatra varavarana ho an'ity tontolon'ny rindrambaiko malalaka ity. Vitako tsara ny nametraka ny Ubuntu tamin'ny PC efa ho 40 ary ny fanontaniana voalohany apetraky ny olona izay asehoko ahy ny Rafitra miasa dia: Ary maninona no tsy dia fantatra loatra i Ubuntu?, Ary heveriko fa ny valiny tsotra dia noho ny tsy fahampian'ny marketing. Raha ny fahitako azy manokana, ny filokana Canonical momba ny fanamorana dia endrika marketing, ny zava-misy fa misy fahitalavitra miaraka amin'i Ubuntu, takelaka misy Ubuntu, finday, sns ... dia mamela olona maro kokoa hanomboka hanontany ny fisian'ny ity Rafitra miasa lehibe ity ary amin'ny tranga tsara indrindra dia andramo, apetraho izy ary ampifandraiso aminy tahaka ny nataoko. Fiarahabana.
Valiny tamin'i Gaspar Marquez
manaiky tanteraka 😀
www.fanatrans.com dia hoy izy:
Ny tontolon'ny takelaka dia, hoy aho, fanomezana avy amin'i Apple, izay nahatsapan'ny mpandrindra fa afaka manampy lanja amin'ny fivezivezena amin'ny endri-birao izy ireo, izay raha ny fiheverako ny fanetren-tena dia toa hevitra tsara, izay matetika tsy izany. mila fahefana amin'ny computing mba hiasa ary samy misafidy ny fitaovana ilainy ny olona farany, te hanontany an'Ivan Ibarra aho hoe manao ahoana ny Plasma Active 3 eo amin'ny takelaka misy azy?
Ratsy, tsy nahita tutorial aho izay manazava amin'ny antsipiriany ny fomba fanaovana azy, ka manohy miaraka amin'ny CyanogenMod 10.1 (Android 4.2.1) aho.